AOC Gaming Monitor U28G2AE / BK | Gadget News
Miguel Hernandez | 15/11/2021 13:00 | General, hevitra
Lasa singa tena ilaina ho an'ny mpilalao sy ireo izay mifandray amin'ny telecommute ny monitors, na dia solosaina finday aza ny PC-nao, tsy misy toy ny écran tsara miaraka amin'ny fotoana filalaovanao tsara indrindra, ary ny AOC Gaming dia mahafantatra betsaka momba izany. Noho izany, anio dia mitondra monitor vaovao ho anao izahay izay ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny lalaonao.
Nandinika ny monitor AOC Gaming U28G2AE / BK izahay, fanaraha-maso tsy misy frame miaraka amin'ny Freesync ary fanapahan-kevitra manaitra ny saina. Aza adino ity famakafakana lalina ity izay ilazanay aminao ny tanjaka rehetra ary mazava ho azy ny fahalemen'ity monitor ity natao ho an'ireo izay milalao indrindra.
3 Fifandraisana sy kojakoja
4 Lalao Modes sy AOC G-Menu
Ity AOC Gaming U28G2AE / BK ity Izy io dia manana endrika mahery setra sy kilalao mahazatra saingy voadio, manomboka amin'ny manana rafitra faran'izay ambany indrindra amin'ny lafiny telo, mazava ho azy fa miresaka momba ny tapany ambony sy ny sisiny isika, eo amin'ny farany ambany dia manana ny sora-baventy ny orinasa sy ny mpitari-dalana roa. mena. Mazava ho azy, ary ahoana no mety hitranga raha tsy izany, manana fototra misy vinavina roa lehibe isika ary vita amin'ny mainty tanteraka. Manana efijery 28 santimetatra izahay na tsara kokoa raha 71,12 santimetatra ny fitambarany.
Dimensions: 469.5 (H) × 636.4 (W) × 244.9 (D)
lanja manontolo: 6,13 Kg
* ny vokatra, tsy anisan'izany ny fonosana
Vidio ny AOC U28G2AE amin'ny vidiny tsara indrindra> LINK
Manana bezel vita amin'ny texture izahay, fijoroana mora apetraka ary mazava ho azy ny fanamarinana VESA. 100 × 100 raha te-hanantona azy amin'ny rindrina isika, zavatra iray no soso-kevitray. Izy rehetra miaraka amin'ny Kensington Lock mahazatra. Manana fivezivezena mitsangana eo anelanelan'ny -5º sy + 23º izahay, eny, tsy mamindra azy amin'ny sisiny izahay. Mazava ho azy fa ny vokatra dia miaraka amin'ny lohahevitry ny "lalao" voamarika, ary ny rafitry ny fametrahana mora ny fanohanana dia tena ankasitrahana amin'ny alàlan'ny rafitra kitiho ao ambadika. Io aoriana io no misy ny seranan-tsambo sy ny famatsiana herinaratra, ary koa ao amin'ny bezel ambany dia manana ny fanaraha-maso ny menio mikasika.
Mandeha mivantana amin'ny angona manta izahay. Ity monitor 28-inch ity dia manana a Tontonana LCD IPS izay miantoka antsika amin'ny zoro lehibe amin'ny fahitana, saika tanteraka araka ny fitsapana nataontsika dia tsy afaka nankasitraka ny karazana aberation rehetra izahay. Misy coating anti-glare izy io izay tena ankasitrahana ary miaro tsara amin'ny jiro artifisialy. Ny endriky ny tontonana dia 16: 9, mety tsara amin'ny filalaovana sy Ny famirapiratany dia amin'ny alàlan'ny rafitra WLED, izay manampy amin'ny fifehezana tsara kokoa ny faritra maizina.
Amin'ny lafiny iray dia manana isika famirapiratana ambony indrindra 300 nits izany no mahatonga antsika hanazava ny mazava, tsy ampy fanohanana HDR izahay, zavatra izay mety hampiadana ny tahan'ny valin'ny tontonana, izany hoe 1 milisegondra (GtoG). Toy izany koa no mitranga amin'ny tahan'ny fanavaozana, izay ho an'ny mpilalao mitaky indrindra dia mijanona amin'ny 60Hz ihany ary eny ho nankasitraka zavatra bebe kokoa izahay. Raha ny loko, dia manana fifanoherana mavitrika amin'ny valo tapitrisa amin'ny iray isika ary iray tsy miovaova amin'ny arivo amin'ny iray, miaraka amin'ny Ny teknolojia AMD Freesync hanatsarana ny fahombiazan'ny lalao.
Ahoana raha tsy izany, manana 85% amin'ny fenitra NTSC sy ny 119% amin'ny fenitra sRGB ka mety amin'ny fanitsiana azy ihany koa, zavatra vitantsika sy izay niaro tena. Ny mari-pandrefesana dizitaly dia mahatratra amin'ny alàlan'ny HDMI 2.0 na DisplayPort 1.2 amin'ny tahan'ny 60Hz amin'ny fanapahan-kevitra 4K na UHD. Tsy lazaina intsony fa mba hanamaivanana ny havizanana dia manana rafitra Flicker-Free sy Low Blue Light isika, miaraka amin'izany dia manantitrantitra aho, ity monitor ity dia mihoatra noho ny fanaraha-maso lalao tsotra, miaraka amin'ny ora fampiasana tsara amin'ny fampisehoana hafa toy ny asa, fanjifana multimedia. ary mazava ho azy fa automation ny birao.
Fifandraisana sy kojakoja
Ity monitor ity dia manana seranana HDMI 2.0 roa ao an-damosiny, izay ahafahantsika mifandray miaraka, ohatra, ny PC sy ny console. Ny fitaovana atombotsika dia hiantso ho azy ny monitor ary hahafantatra hoe iza no seranan-tsambo HDMI hanomboka ho azy, fa raha ny fahitako azy dia tena ilaina amin'ny monitor gaming. Mazava ho azy fa tsy nanadino ny nampiditra USB HUB kely na seranan-tsambo USB-C izay ahafahantsika mampifandray mivantana ny periferika amin'ny monitor, mety hamonjy toerana kely eo ambony latabatra izany. Raha tianao dia azonao atao ny mividy azy ETO amin'ny vidiny tsara indrindra.
AOC Shadow Control sy AOC lalao loko: Ireo rindrankajy AOC fanampiny fanampiny dia mampiseho jiro sy famirapiratana, manolotra traikefa tena akaiky ny HDR voamarina, mamono ny ampahany manokana amin'ny tontonana izay tsy ampiasaina mba hanaterana mainty madio kokoa.
Tsy maintsy lazaina fa manana ihany koa isika seranana iray Display Port 1.2 ary 3,5-milimeter hybrid headphone output. Amin'ny lafiny iray, tsy tokony hohadinointsika fa ity AOC ity U28G2AE / BK manana mpandahateny roa, ka afaka mankafy feo stereo izahay, satria 3W ny hery ny tsirairay. Na dia ampy aza ny manala antsika amin'ny làlana sy manatanteraka ny fanjifana multimedia, dia tsy manana bass izy, na dia eo aza ny zava-misy fa ny traikefa dia somary tsara raha jerena ny compactness ny monitor sy ireo mpandahateny ireo ihany. Tsipiriany ny fampidirana an'io karazana fanamafisam-peo fanohanana io, indrindra rehefa tsy misy azy ireo ny mpanara-maso maro hafa ao anatin'io faritra io.
Lalao Modes sy AOC G-Menu
Ny fanaraha-maso dia manana fomba lalao enina efa voafaritra mialoha: FPS, RTS na hazakazaka, na izany aza, amin'ny alàlan'ny AOC Settings KeyPad (ny menu bezel ambany) dia afaka manitsy ny mombamomba, mitahiry vaovao ary na dia manova ny efa misy aza. Manoro hevitra foana aho ny hampiasa an'ity menio ity, izay ny interface dia tena intuitive, mba hanitsiana azy io araka ny tokony ho izy sy araka izay tianao.
Ankoatra izany, ny AOC G-Menu Izy io dia fampiharana fanampiny izay azontsika apetraka amin'ny Windows ary izany dia ahafahantsika mampifanaraka ny mpanara-maso antsika miaraka amin'ny toetra manokana ary koa ny masontsivana sasany, eny, amin'izao fotoana izao dia tsy nahita mihoatra noho ny mpampiasa interface tsara izahay, fa ny fiasa mitovy na mitovy amin'ny an'ny menu.
Ity AOC U28G2AE / BK Izy io dia safidy tsara sy azo ampiasaina amin'ny maha-manara-maso ny lalao, manana habe, fanerena fidirana ary fifandraisana tena tsara, miaraka amin'ny tontonana IPS mazava tsara sy endrika kalitao. Malahelo ny HDR na ny tahan'ny famelombelomana ambony kokoa izahay, saingy ao anatin'ny faritra misy azy dia azo antenaina ny toetrany, izay saika tsy misy na inona na inona. Azonao atao ny mividy izany amin'ny Amazon amin'ny 323,90 euros, amin'ny vidiny tsara indrindra ary miaraka amin'ny fanaterana ao anatin'ny iray andro monja.
Navoaka tamin'ny: Novambra 15 avy amin'ny 2021
Fanovana farany: Novambra 5 avy amin'ny 2021
Famolavolana lehibe sy fifandraisana
Latency ambany sy fifehezana famirapiratana tsara
Panel misy vahaolana tsara
Malahelo ny 120Hz aho
Tsy misy HDR
Tsy misy USB HUB
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Monitor AOC Gaming U28G2AE / BK
Realme GT Neo2, safidy mahery vaika amin'ny antonony
Lalao PC 10 izay mitaky fepetra vitsivitsy